Ma gabagabadii is-kooxeysiga xisbiyada ayaa la soo gaarey? - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ma gabagabadii is-kooxeysiga xisbiyada ayaa la soo gaarey?
La daabacay torsdag 4 juli 2013 kl 11.59
Waxaa beryahaan dambe siyaasadda xisbiyada dalka laga dhadhansaaayey iska horimaadyo iyo in ay hadalo kulul isku tuuraan. Sidaas oo ay tahay ayaa haddana waxaa dhici kara in dowladda la soo dhisi doono doorashada kadib ay ka koobnaan karto xisbiyo hadda iska soo horjeeda. Jan Larsson oo hadda ka shaqeeya bangiga Nordea, horeyna ka mid ahaa ragga ugu dhow hoggaamiyihii hore ee xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga Göran Persson ayaa arrintaan ka yiri:
- Haddii xisbiga dimoqraadiyiinta Iswiidhen soo xoogeysto waa in markaas laga fekeraa waxa u wanaagsan Iswiidhen. Waxaan anigu aamminsanahay in dowlad ka kooban xisbiyo mabaadi’da ku kala geddisan ay u fududaan lahayd in ay hadafkooda caddeeyaan oo go’aamadooda marsiiyaan baarlamaanka. Oo sidaas lagu hadaf aad ugu wanaagsan Iswiidhen oo aan qabo in aan hadda u baahanahay.
Dhanka Per Schlingmann oo ka socda xisbiga Mooderaatka ayaa qaba in haddii xaaalad adag ay baarlamaanka la soo gudboonaato ay xisbiyada dalku diyaar u yihiin in ay xal raadiyaan. Wuxuuna isagoo taas dabaraacaya yiri:
- Waxaan dareensanahay in dhammaan xisbiyada dalku ay muujiyeen in ay diyaar u yihiin in ay dhabar u ritaan mas’uuliyadda dalka.
Wararka soo kordhaya oo saadaalinaya in is kooxeysiga xisbiyadu gebagebo kujiro, waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay dheellitir la’aanta soo dhexgeli karta xisbiyada dowladda ku midoobey. Taas waxaa loo aaneynayaa xisbiyada Folkpartiet ama gaar ahaanna xisbiyada Dhexe iyo Dimoqraadiga masiixiga ah oo sii yaraanaya kuna milmaya xisbiga weyn ee Mooderaatka oo ay isku bahda yihiin.
Isha: SR International